ခင်မင်းဇော်: နော်ဝေးတွေရဲ့ စိတ်ကို ဖတ်ခဲ့ရာဝယ်
လူကို တန်ဖိုး မထားတတ်တဲ့ နာဇီတွေကို လူတွေ သေကြေမှာစိုးပြီး လွယ်လွယ် အရှုံးပေးလိုက်တာတော့ မကြိုက်ဘူး။ သူတို့ လက်ထဲဆို ဒိထက် ပိုဆိုးတော့မပေါ့။ အမရေးပြတဲ့ ကျန်တာတွေတော့ နားလည်ပြီး သဘောကျပါတယ်။ အဲဒီတခုက လွဲရင်ပေါ့..
အမလဲ နားမလည်ဘူး သူတို့ကိုဘာလို့ အရှုံးပေးတာလဲ မေးတော့ လူတွေမသေအောင် နိုင်ငံမထိခိုက်အောင်ဆိုပဲ.. သူတို့နိုင်ငံမှာတော့
အလွယ်တကူ အရှုံးပေးလိုက်တာကတော့ သိပ် မဟုတ်သေးပါဘူး... ဂျာမန်တွေက ဘာမှ မလုပ်ဘူး ဆိုတော့ ... ယိုးဒယားကို ဂျပန် ၀င်ခဲ့သလိုမျိုး ဖြစ်နေတာလား...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နော်ဝေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာတော့ အတော် ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံပါပဲ... များများ ရေးပါဦးဗျို့...
ဆက်ရန်တွေကို အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့ပဲမျှော်နေရတာပဲ ..း)
မြန်မာတွေကလည်း နော်ဝေလူမျိုးတွေကို အတုခိုးတာပဲဖြစ်မယ်…သိလား။
လူတွေ သေကြေကုန်မှာစိုးလို့ နအဖကို ထွက်ပြီးဆန္ဒမပြစေချင်တာတဲ့လေ။ အဲသည်ရှုထောင့်က ရေးနေတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂါတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကြံဖန်ချီးမွန်းရရင်တော့ နော်ဝေစိတ်ဓါတ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်ဓါတ်ပေါ့လေ။ (ကျနော်တော့ အဲသည်စိတ်ဓါတ်ကို တယ်ပြီး သဘောမကျလှဘူး။)
ရေးမလို့လုပ်မှ ရှေ့ကအစ်မတွေလည်းရေးသွား တာတွေ့တယ်။ လူအခွင့်အရေးရတာတော့မှန်ပါရဲ့။ ကိုယ့်နိုင်ငံကိုဒီလိုပဲ လွယ်လွယ်အညံ့ခံရမှာလား။ ပြီးတော့ နယ်ချဲ့တဲ့သူဆိုတာ ကိုလိုနီနိုင်ငံကို ဘယ်တော့မှတစ်တန်းတစားတည်းလက်ခံပေးတာမှ မဟုတ်တာ။ နာဇီဖက်ဆစ်ဆိုတော့ ပိုဆိုးဦးမှာ။ ညီမတော့ အဲဒါစိတ်ဓါတ်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။ အစ်မရေးတာဖတ်ပြီးတော့တော့ နော်ဝေသွားလည်ချင် စိတ်ပေါက်သွားတယ်။
နော်ဝေ ကို ကျမသိပ် စိတ်ဝင်စားတယ်။ တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ နေရာမှာတော့..၂ယောက်မရှိပဲ။ သိက္ခာရှိတယ်ပေါ့နော်။
အခု ဆေးသမားတွေ အကြောင်းသိလိုက်ရပြန်တာလဲ..အတော်စိတ်ဝင်စားစရာ..ပဲ။
Actually you cannot simply compare Norway with Burma or Thailand. Norway hasavery long coast line and relatively big country. According to current statistics, it has only 4.6 Million population (similar to Singapore). Oslo might be the same size as Singapore island to give you an idea.
Norway was one of the poorest country in Europe when Germans invaded them and they had very limited resources to defend them.
နာဇီဟစ်တလာကို အင်အားချင်းမမျှလို့ အညံ့ခံလိုက်တာ.. ဒိန်းမတ်ကိုသိမ်းတုံးကလည်း လွယ်လွယ်လေးပဲ။ တိုင်းပြည်နာမှာစိုးလို့ ဟစ်တလာစကားနားထောင်ပြီး ရုပ်သေးအစိုးရအနေနဲ့ နာဇီခိုင်းတာ လုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ နောက်တော့လည်း သီးမခံနိုင်တော့ မြေအောက်ဆန့်ကျင်ရေးတွေလုပ်ပြီး ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြလို့ ဂတ်စတာပို သတ်တာခံရတဲ့ ဒိန်းမတ်တော်လှန်ရေးသမားတွေ အများကြီးပဲ။
နော်ဝေးက သံချပ်ကားကြီးကို တွေ့မိပြီး ကန်တော်ကြီးက တင့်ကားကြီးကို မဆီမဆိုင် သတိရမိတယ်။
အမရေ....နော်ဝေးအကြောင်း ကို ဖတ်သွားပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ဒီဗွီဘီ တီဗွီအစီအစဉ်ကို ဘာဖြစ်လို့ ဖြုတ်လိုက်တာလဲဟင်။ တိုက်ရိုက်ကြည့်လို့ မရရင်တောင် လင့်ခ်လေးပေးထားရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ you tube ထဲမှာ ဝင်ကြည့် ရတာလည်း အားမရပါဘူး။ ဆယ်မိနစ်စာလေးပဲ ပါလို့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမရေ ယူကေမှာလည်း Big Issue လို စာအုပ်မျိုးကို သူတို့ရောင်းရတယ်... သူတို့ရဲ့ ဆေးဖိုးခေါ်မလား.. တပတ်တခါ ထွက်တဲ့ အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကို အလုပ်ရှာတဲ့ ဌာန မှာ သွားယူပြီး လမ်းမှာ ရောင်းပေါ့.. မီယာလည်း စိတ်ပေါက်ရင် ၀ယ်ဖတ်ပါတယ်... ယူရိုမီလီယံ ထီထိုးမယ့်အစား ၁ကျပ်ခွဲပေးပြီး စာအုပ်ဝယ်ပါလို့ ယောကျာ်းကိုတောင် တိုက်တွန်းမိသေးတယ်။